Shiinaha warshad yar oo jilicsan oo jilicsan iyo soosaarayaasha | Kingtai
Noocyada Muhiimka ah Musmaarradeena dhabta ah ee dhinta-tuurista ayaa lagu dhammaystiri karaa dusha dhalaalaya ama gaarka ah.
Biinniintan dhabta ah waxay leeyihiin tusaalayaal naqshad 3D ah oo loogu talagalay tixraacaaga waxayna kuu soo bandhigi doonaan sawirro 3D ah biinankaaga dhabta ah
Biinankaani waxay leeyihiin qaab naqshad u gaar ah oo u gaar ah, marka loo eego doorbidyada macaamiisha inay qaabeeyaan sheyga.
Farsamooyin badan oo kala duwan ayaa la heli karaa, oo ay ku jiraan ku darida midabada dhaldhalaalka dhalaalaya.
Biinanka dhabta ah ee caadiga ah waxaa laga sameeyaa zinc ama pewter waxaana lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo habka dhalaalida.
Birtu waa kuleyl qaab dareere ah, waxaa lagu shubay caaryada, waxaana lagu soo saaraa wareejinta wareejinta.
Waqtiga wax soosaarka: 15-20 maalmood oo shaqo kadib dib u eegista farshaxanka.
Raadinta biinanka kabka caadada?
Shirkadeena waxay soo saari kartaa 3D biinanka laabta lagu rito!
Biinanka ridaya waxay bixiyaan multirelief aan caadi ahaan lagu gaadhin iyadoo la adeegsanayo habab shaabbado caadi ah.
Halkii laga heli lahaa hal aag oo keli ah iyo hal meel oo dib loo celiyo (sida qaabka 2-D lapel pin), farshaxankan noocan ahi wuxuu si fiican u soo bandhigayaa qaababka muuqaalka dhulka, iyadoo la abuurayo qaab dhismeedyo adag iyo faahfaahinta wajiyada, qaababka iyo xayawaanka.
Dhimashada tuurista Biinanka ridaya dhinta waxaa laga sameeyaa shubista halkii laga sameyn lahaa habka shaabbinta.
Caaryada ayaa la sameeyaa ka dibna biro dareere ah ayaa lagu shubaa caaryada si ay u sameyso biin shuban dhinta.
Sababtoo ah nidaamkani waa ka qaalisan yahay, haddii goyntu aysan u baahnayn waxaa fiican in la doorto dhaldhalaalka jilicsan ee khaaska ah ama cirbadda dhaldhalaalka ee caadiga ah.
Pin pin-casting pin Waa maxay caado-u-dhimista caadadu?
Biinanka ridaya dhinta ayaa ah mid aad u gaar ah maxaa yeelay qaabku ma ahan wax dhibaato ah.Wuxuu sameyn karaa qaab kasta oo uu macaamilku doonayo.Waxaa lagu sameyn karaa jarjar hareeraha warqadda ah, dalool dhexda bartanka biin ah, qaab gaar ah, ama wixii kale cunsur aad jeceshahay
Waxay abuuraan qaabab adag iyo naqshadeyn iyagoo abuuraya caaryo caado ah ka dibna lagu durayo bir la isku qurxiyo oo bir ah. Birta ayaa adkaata marka ay qabowdo. Marka lagu daro, way ka fududdahay naxaasta ama birta waxaana loo isticmaalaa biinka dhinta.
Cirbadda ridaya dhinta waxaa lagu dooran karaa dhammaan lacagta, dhammaan dahabka, ama midab kasta oo macdan ah.
Waxaad ka dooran kartaa dhaldhalaalka jilicsan ama adag ee noocyadeenna buuxa ee midabada Pantone ama PMS, waxaanan kuu haynaa Kaadhadh midabyo kala duwan ah oo aad adigu kala dooran karto si aad si fiican ugu soo saartid wax soo saar aad u dhammaystiran, firfircoon, markaa waxay umuuqataa mid aad ugu eg cirbadda caaryada.
Cirbadaha dhinta ayaa bixiya dabacsanaan buuxda ee badeecada, taas oo u oggolaaneysa qaababka gaarka ah ee naqshadeynta oo leh tiro aan xadidneyn oo faa'iidooyin dheeri ah - dhammaantood waa bilaash
Macaamiil badan ayaa isticmaala biinanka tuurista dhinta maxaa yeelay waxay rabaan inay muujiyaan naqshad isku dhafan ama saameyn astaan ​​ah, waxay ku raad joogaan tayo sare leh saameyn muuqaal ah, waxayna u baahan yihiin harqaan.
Ama waxay u baahan karaan biin leh qaab adag ama qaab aan caadi ahayn.
Waxay rabaan alaabooyin gaar ah.
Badanaa, biinanka - biinanka kabka ayaa la dalbadaa markay ka weynaadaan laba inji
Sababtoo ah habka loo sameeyo dhimashadu way ka dhib badan tahay habka loo sameeyo biinka dhinta ee shaabadda birta, xoogaa way ka qaalisan yihiin.
Laakiin xitaa markaa, qiimaha wuu kala duwan yahay iyadoo kuxiran cabirka iyo tirada amarka.
Waxaan u rogi karnaa shaqo farshaxan iyada oo loo marayo fikraddaada naqshadeynta ama fikradda naqshadeeyeyaasheena xirfadeed, oo waxaan u dejin karnaa si gaar ah badeecadaada.
PinProsPlus wax lacag ah kama qaado.
Hore: Khatarta Lapel Pins
Xiga: Dhimo pinel dhabel ku dheggan
Dhimashada biinanka jilibka
sawir guntin pinis